I-SPC Smart Ultimate, inketho yangempela yokonga kakhulu | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 28/03/2022 10:00 | General, AmaSelula, Izibuyekezo, I-Telephony
Sibuya no SPC, ifemu ehambe nathi ngokuhlaziya okuningi eminyakeni yamuva, nakuba lesi sikhathi sinethuba lokubona idivayisi mhlawumbe engeyona umugqa webhizinisi onamandla kakhulu womkhiqizo, kodwa ongalokothi ukhohlwe ukukhumbula, sikhuluma ngama-smartphone.
Sihlaziya i-SPC Smart Ultimate entsha, inketho yokonga enakho konke okudingayo ekuphileni kwansuku zonke nokuzimela okuhle kwalabo abakhathalela intengo.. Zitholele nathi izici zalesi siphetho esisha se-SPC futhi uma sizibeka njengenye indlela ngokwenani laso.
1 Idizayini: Intengo nokuqina kwefulegi ngalinye
3 Isipiliyoni seMultimedia nokuzimela
Idizayini: Intengo nokuqina kwefulegi ngalinye
Okokuqala, sithola umzimba wepulasitiki, into eyenzeka futhi ngemuva, lapho sinesembozo esenziwe ngokuthungwa kabili esivumela ukuthi sinikeze ukubamba okukhulu nokubukeka, kungani singasho, into ejabulisayo. Feyenziwe ngepulasitiki emnyama ngemuva, Konke ukuvelela kusasele okwenzwa kanye ne-flash ye-LED.
Izilinganiso: 158,4 × 74,6 × 10,15
Isisindo: I-195 amagremu
Ingxenye engenhla yejekhi engu-3,5mm isekhona, kanti engxenyeni engezansi sinembobo ye-USB-C esizokhokhisa ngayo. Inkinobho ekabili kuphrofayela yesobunxele yevolumu kanye nenkinobho "yamandla" ngakwesokudla, ngokubona kwami, ibingayenza ibe nkulu kancane. Ifoni inezilinganiso ezinkulu kanye nesisindo esihambisanayo, kodwa izwakala yakhiwe kahle futhi ibonakala inezinga elihle lokumelana nesikhathi nemithelela.
Okwakamuva sinakho ikesi le-silicone elikhanyayo elifakwe ephaketheni, kanye nekhebula lokushaja, i-adaptha yamandla kanye nefilimu evikelayo yesikrini esifika sifakiwe. Idizayini evumayo, enozimele abaphinyisiwe endaweni engaphambili kanye nekhamera "yohlobo lokudonsa".
Le SPC Smart Ultimate ihambisana neprosesa I-Quad Core Unisoc T310 2GHz, okuthile okuhlukile kulokho esijwayele ukukubona nge-Qualcomm Snapdragon eyaziwayo kanye ne-MediaTek. Yini enye, Ihambisana ne-3GB ye-LPDDR3 RAM. ukuthi ekuhlolweni kwethu ihambe kahle ngokuqhathaniswa nezinhlelo zokusebenza ezivame kakhulu kanye ne-RRSS, nakuba kusobala ukuthi asikwazi ukucela umzamo, ngenxa yomthamo, obungeke wenziwe.
Ine- IMG PowerVR GE8300 GPU ngokwanele ukusebenzisa izithombe zezinhlelo zokusebenza ezishiwo ngenhla kanye nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi, kude nokunikeza ukusebenza okwamukelekayo kumageyimu wevidiyo alayishwe kakhulu njenge-CoD Mobile noma i-Asphalt 9. Mayelana nesitoreji, sinememori yangaphakathi engu-32GB.
Lonke lolu sethi lwehardware lusebenza ne-Android 11 enguqulweni ehlanzeke kakhulu, into eyaziswa kakhulu, isuka kwezinye izinhlobo ezifana ne-Realme egcwalisa isikrini sethu nge-adware, into ebonakala sengathi nina ebeningilandela isikhathi eside ngibe yiphutha elingaxoleleki.
Lokhu kusho ukuthi yeboSizothola kuphela izinhlelo zokusebenza ezisemthethweni ze-Google ukusebenzisa kahle Uhlelo Lokusebenza, kanye nokusetshenziswa okusemthethweni kwe-SPC.
Ezingeni lokuxhumana sizoba nalo wonke amanethiwekhi e-4G evamile endaweni yaseYurophu: (B1, B3, B7, B20), kanye 3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) futhi Yebo GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Siphinde sibe ne-GPS ne-A-GPS kanye WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. I-2.4GHz kanye ne-5GHz ehambisana nokuxhuma I-Bluetooth 5.0.
Kusidonsela ukunaka kwethu ukuthi siqhubeke nokukhetha ujabulele umsakazo we-FM, okuthile okuzojabulisa ngokungangabazeki umkhakha othile wabasebenzisi. Ngakolunye uhlangothi, i-tray ekhishwayo izosivumela ukuthi siyifake amakhadi e-NanoSIM amabili noma wandise inkumbulo ifike ku-256GB ngaphezulu.
Isipiliyoni seMultimedia nokuzimela
Sinesikrini 6,1 amayintshi, iphaneli ye-IPS LCD enokukhanya okwanele, nakuba ingase ingakhanyi kangako ezimweni zangaphandle ngokukhanya kwemvelo okuningi kakhulu. Iphinde ibe ne-aspect ratio yemibala eyizigidi ezingu-19,5: 9 kanye nezigidi ezingu-16,7, konke ukunikeza ukulungiswa kwe-HD +, okungukuthi, 1560 × 720, okunikeza umsebenzisi ukuminyana kwamaphikseli angu-282 iyintshi ngayinye.
Isikrini sinokulungiswa okwanele kombala kanye nephaneli elishibhile ngokusobala. Umsindo, ovela kusipika esisodwa, unamandla ngokwanele kodwa awunawo umlingiswa (ngenxa yezizathu zamanani ezisobala).
Mayelana nokuzimela sinawo a 3.000 mAh ibhethri, nakuba ngenxa yobukhulu bedivayisi besingase sicabange ukuthi ingaba ngaphezulu. Asinalo ulwazi mayelana nesivinini sokushaja, uma sengeza kulokho ukuthi alifakiwe ebhokisini (naphezu kobukhulu bayo) ayikho i-adaptha yamandla, ngoba sinesiphepho esihle kakhulu.
Kodwa-ke, lI-3.000 mAh inikeza umphumela omuhle wosuku nohhafu noma izinsuku ezimbili kucatshangelwa amakhono obuchwepheshe bedivayisi nokuthi Uhlelo Lokusebenza luhlanzeke kakhulu, ngakho-ke ngeke sibe nezinqubo ezingenangqondo ngemuva.
Yiba nekhamera yangemuva I-13MP ekwazi ukuqopha ngokulungiswa kwe-FullHD (ngenhla kwesikrini), ayikho Imodi Yasebusuku noma amandla okunyakaza okunensa. Ngakolunye uhlangothi, ikhamera yangaphambili ine-8MP yama-selfies angaphezu kokwanele. Ngokusobala, amakhamera ale SPC Smart Ultimate ahambisana nenani layo eliphansi futhi inhloso yawo akuyona enye ngaphandle kokukwazi ukwabelana ngokuqukethwe okuthile kumaSocial Networks futhi kusikhiphe enkingeni.
Le SPC Smart Ultimate Inezindleko zama-euro ayi-119 kuphela, futhi angazi noma kufanele ube nenye into engqondweni. Kuncane okudingekayo kutheminali ebiza kancane. Sizithola sinesisindisi sempilo, ucingo olusivumela ukuthi sishaye izingcingo ngaphansi kwezimo ezinhle, sidla okuqukethwe kwe-multimedia ezinkundleni eziyinhloko ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokuthatha kancane futhi sixhumane nabathandekayo bethu ngezinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu, akukho okunye.
Ihlinzeka ngezingxenyekazi zekhompiyutha eziphakeme kakhulu zentengo, iqhudelana ngokuqondile nobubanzi beRedmi ye-Xiaomi, kodwa isinika umuzwa ohlanzekile ngokuphelele, ngaphandle kwabalamuli, ukukhangisa noma izinhlelo zokusebenza ezingadingekile. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ifoni yezingane, abadala noma idivayisi yesibili nje esindisa ukuphila, le SPC Smart Ultimate ikunikeza lokho kanye oyikhokhelayo.
Kuthunyelwe ku: I-28 March ka-2022
I-OS ehlanzekile ngokuphelele
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-SPC Smart Ultimate, inketho yangempela yokonga kakhulu